Taorian’ny Hetsi-Panoherana Mahery Setra Niarahan’ireo 200 000 Tany Indonezia, Manaraka ny Fanontaniana Momba Ny Fiarovana Ny Finoana Silamo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2016 1:58 GMT
Tombanana ho 200 000 no nanatevin-daharana ny hetsi-panoherana mitaky ny handroahana ny governeran'i Jakarta izay voampanga ho naniratsira ny Silamo. Sary: Youtube
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, tamin'ny 04 Novambra, tombanana ho olona eo amin'ny 200 000 tao Indonezia — firenena isan'ny be mponina Silamo indrindra maneran-tany — no nanatevin-daharana ny hetsi-panoherana teo anoloan'ny lapam-panjakana nitakiana ny handroahana ny governoran'i Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (fantatra kokoa amin'ny “Ahok”) izay ampangain'ireo mpitarika Silamo mahafatra-po ho nahavita niteny ratsy ny finoana.
Nivadika ho herisetra ilay famoriam-bahoaka nokarakarain'ny Fikambanana Mpiaro ny Fomban-drazana Silamo (FPI) ary maro no nampitaha ny fihetsiketsehana tamin'ny korontana izay nanozongozona an'i Jakarta, renivohitry ny firenena, tamin'ny 1998.
Ahok dia Sinoa kristianina mpanao politika izay voalaza fa nanevateva ny finoana Silamo tamin'ny alalan'ny fitanisana andininy sasany nalaina tao amin'ny Korany momba ny fifidianana olona tsy Silamo. Voarakitra anaty lahatsary ny kabarin'i Ahok manonona andinin-teny masina Silamo, izay noraketina an-tsoratra miaraka amin'ny hadisoana taty aoriana, ka nahatezitra Silamo ary ampiasain'ny Silamo sy ny fahavalony hanoherana azy.
Nilaza ampahibemaso ireo mpitarika fivavahana Silamo tony fihetsika avy amin'ny Nadhlatul Ulama (Fikambanana Silamo lehibe indrindra any Indonezia), Muhammadiyah (Fikambanana Silamo faharoa lehibe indrindra any Indonezia), ary ny Imam Lehibe an'ny Maoske Istiqlal Jakarta (ny Maoske lehibe indrindra any Azia Atsimo Atsinanana) fa tsy nanompa ny Silamo i Ahok, araka ny fahitan'izy ireo, fa tamin'ny alalan'ny fanaovana hetsi-panoherana tamin'ny 4 Novambra nitakiana ny fanesorana azy amin'ny asany dia manizingizina kosa ireo mpitarika fivavahana mpandala ny mahazatra fa meloka noho ny fitenenan-dratsy ny finoana ny governora.
Fa ny tena marina, an'arivony no nanatevina ny hetsi-panoherana hiarovana ny finoana Silamo, fa ny mpandalina sasany nanamarika fa nahazo ny fanohanan'ny olona an'arivony mahery izay voaroaka tamin'ny tranony noho ny fampielezankevitra fandravana an-terisetra ireo olona ratsy trano nataon'i Ahok koa ity famoriambahoaka ity. Ankoatra izany dia fantatra ihany koa fa i Ahok no manampahefana ambony voalohany nangataka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Ministeran'ny Atitany ao an-toerana ny handraràna ny asan'ny FPI.
Herinandro maromaro talohan'ny fihetsiketsehana, nivezivezy tamin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ny hafatra mifono fanavakavaham-bolon-koditra navantana tamin'i Ahok. Ohatra, ity bokikely eto ambany ity manontany ny mpamaky azy raha hanohana ny famonoana an'i Ahok izy ireo.
fampanantenana poakaty ny #peaceprotest411. Mivezivezy ny kabary, sora-baventy, peta-drindrina feno fankahalana sy herisetra.
Voalaza fa nampirisika ireo mpanaraka mba hanasazy an'i Ahok ary mba ‘handrehitra’ ny ady masina any Indonezia ireo vondrona mahery fihetsika toy ny jihadista Siriana.
Tonga tao amin'ny faritra fonenana any amin'ny tapany avaratr'i Jakarta, izay onenan'i Ahok ny hetsi-panoherana izay natao voalohany tao afovoan-tanàna. Potika ny fananam-bahoaka ary fivarotana maro no voaroba, nampiparitaka tahotra tao an-tanàna ary niteraka #safetycheckjakartatao amin'ny Twitter (efa fanindroany tamin'ity taona ity, taorian'ny daroka baomba tamin'ny volana Janoary). Ampitahaina amin'ny korontana tamin'ny 1998 ilay herisetra, tamin'ny nisian'ny vahoaka romotra nandroba sy nandoro tranom-barotra sinoa-indoneziana maro.
Voatoraky ny vato ny fitaratry ny fiaran'ny namana iray satria izy, ny mpamily, dia mandry maso. Voatoraky ny vato koa ny varavaram-pitaratry ny trano fisakafoanana iray tany Muara Karang.
Nony niparitaka tsikelikely ny hetsi-panoheranana, naneho ny alahelony momba ny herisetra ny filoha Indoneziana, Joko Widodo, ary nanameloka ireo “mpisehatra politika” izay lazainy fa manararaotra ny toe-draharaha mba hampielezana korontana. Nanome baiko ny miaramila ny filoha taorian'izay mba tsy handefitra amin'ny asa fihantsiana izay mety hampizara ny firenena.
Ny marina dia tsy hiarovana ny fivavahantsika ilay hetsi-panoherana androany. Henoy fotsiny izay angatahan'izy ireo. Tian'izy ireo hametra-pialana i Jokowi.
Avy hatrany ny polisy dia nisambotra ireo noahiahiana ho nandroba mpivarotra tao an-toerana sy namono manamboninahitra.
Misy ihany koa sahoan-dresaka milaza fa natao hanalàna baraka an'i Ahok izay mitarika amin'ny fanadihadiana ao an-toerana ho fanomanana ny fifidianana ao Jakarta amin'ny taona hoavy ilay hetsi-panoherana.
Tao anaty lahatsoratra tao amin'ny Facebook, izay tsy ela dia niparitaka be, Sumanto Al Qurtuby, Indoneziana Islamika manampahaizana, izay mipetraka any Arabia Saodita, nanontany ny antony nanosika ireo mpikarakara ilay famoriambahoaka:
Lazainareo fa “jiady araka ny lalam-panorenana ” hiarovana ny firenena io, nefa nalainao baraka ny fototry ny firenena sy ny lalàm-panorenana. Tsy norarahianareo ireo dingana araka ny lalàna, ny fomba fanao ara-dalàna, ary ireo dingana maro.
Lazainareo fa Jiady hiarovana ny finoana Silamo io, nefa tsinontsinoavinareo ny fenitra sy ny etika. Tsy norarahianareo ny toetsaina sy ny fitondrantena Silamo. Romotra ny fihetsikareo, toy ny nidiran'ny fanahy ratsy, ary ny teny adalanareo dia porofo mazava fa tsy niaro ny finoana Silamo ianareo.
Tsy jiady hiarovana ny Finoana Silamo, Al-Qur'an, na Andriamanitra no nataonareo. Fa Jiady ho fiarovana ny hambom-ponareo, hiarovana ny fikambanana Islamikanareo, ny fitiavantenanareo, ary ny hetahetam-pahefana ananareo samirery no nataonao.